यस्तो छ तपाईको बुधबारको भाग्य ? असोज ६ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् « Gaunbeshi
यस्तो छ तपाईको बुधबारको भाग्य ? असोज ६ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः प्रतिष्पर्धीहरु सवल रहनाले कार्यसम्पादनमा बिषेश साबधान रहनु पर्ने समय रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धो का हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । सामुहिक कार्यमा सहभागी हुने अबसर रहेकोछ ।
बृषः अध्ययन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । आफन्तजनहरु बिच सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले उठाउन सक्नेछन् ।
मीथुनः सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला । प्रेममा सुधार आउनेछ । मान्यजनको साथ सहयोले आम्दानिका क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ । मातृ पक्षको सहयोले बौद्धिक बिकासमा जुट्ने समय रहेको छ ।
कर्कटः मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । एक्लो निर्णयले दाजुभाई बिच मन मुटाब रहन सक्ला । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वास घात हुन सक्छ । पारीवारिक मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला ।
सिंहः मनमा सामान्य डर पैदा हुने साथै मनमा चन्चलताले बास गर्ने छ । बोलिको प्रभाबको कारण मान्यजन को साथ पाईनेछ । स्बास्थ सम्बन्धि समस्यामा सुधार आउनेछ । मित्रजनको साथ सहयोले आक्स्मिक धनलाभ हुन सक्नेछ ।
कन्याः भौतिक शुःख साधन प्राप्त हुनेछ । शारीरिक आलस्यले सताउन सक्छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । हराएका धनमाल प्राप्ति योग रहेको छ । बौद्धिक ब्यक्तित्वहरुको सहयोगले कार्य सम्पादनमा बिशेष फाईदा हुनेछ । संगित तर्फ रुचिजाग्नेछ ।
तुलाः प्रेमी प्रेमीका बिच मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसायबाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । सामान्य क्षती ब्यर्होनु पर्ला । परोपकार को क्षेत्रमा मन जानेछ । साधारण खर्च भएतापनि दिन मध्यम रहनेछ । पारीबारिक साथ सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ ।
बृश्चिकः मित्रजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । बिद्या तथा ब्यापारको राम्रो योग रहेको छ । बोलिको खराब अर्थ लाग्नाले सामान्य झ न्झ ट आईपर्ला । धनमालमा सामान्य क्ष ति हुने योग रहेको छ सजग रहनु होला । लगानि गर्दा बिशेष होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ ।
धनुः पारीवार तथा ईष्टमित्र सँग अवस्था सुधार आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्या ले सताउन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । शुभचिन्तकहरुको सङ्ख्या मा बृद्धि हुने छ ।
मकरः आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच अवस्था सुधार रहनेछ । परीवारजनहरु सँग कार्य क्षेत्रका कारण सामान्य मदभेद रहन सक्नेछ ।
कुम्भः बोलिको कारण साधारण समस्या आउन सक्नेछ । स्वास्थ सम्बन्धी समस्याले सताउला । स्तान्तरण को योग रहको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चिन्ताले स ता उ न सक्छ । सामान्य अपजस प्राप्त हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
मिनः ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । मित्रजनहरु बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहने छ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नेछ ।